ओली सरकारका उप-प्रधानमन्त्रीले फेरी भने - एकल राज्य मान्दैनौ, हामीमाथि विभेद छ ! - Kantipath.com
ओली सरकारका उप-प्रधानमन्त्रीले फेरी भने – एकल राज्य मान्दैनौ, हामीमाथि विभेद छ !
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल एकल राज्य नभएको दावी दोहोर्‍याएका छन् । उनले देशको संविधान अधुरो रहेको तथा देशमा विभिन्न जातजातिमाथि विभेद ब्याप्त रहेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै महतोले यस्तो बताएका हुन् । महतोले भने, ‘यो देश बहुलताले भरिएको छ । विविधताले भरिएको छ । नेपाल एकल राज्य होइन, बहुल राज्य हो । विभिन्न जाति-समुदायको देश हो । उनीहरु सबैमा समान व्यवहार भइरहेको छैन । नियम कानूनमा पनि विभेद छ र व्यवहारमा पनि ।’ उनले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सबैभन्दा पहिले पाटीको नीतिलाई मुख्य ध्यानमा दिँदै काम गर्न निर्देशन दिए ।
आफ्नो पार्टी कांग्रेस र कम्युनिष्टजस्तो नभएको महतोले बताए । कांग्रेस र कम्युनिष्टले गर्न नसकेको काम गर्नका लागि पार्टी स्थापना भएको भन्दै उनले समाजमा व्याप्त शोषण र उत्पीडन समाप्त गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो पहिलो दायित्व र रुझान भनेको पार्टीको मूल्य-मान्यता हो । हामी २४ घन्टा नै त्यसलाई याद राख्ने छौं ।’ महतोले भने ।
मन्त्री महतोले थरूहट आन्दोलनमा लागेका पार्टीका नेता रेशम चौधरी जेलमा रहेको बताउँदै सर्वोच्चले मुद्धा टुङ्याएपछि राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय माफी गराएर चौधरीको रिहाइ गराउने जानकारी गराए । उनले रेशम चौधरीको रिहाइको विषयमा ध्यानमा राखेको जानकारी गराए ।
Previous Previous post: मसानघाटको मन्जुरी
Next Next post: २ डाक्टर र स्वास्थ्य सामग्री लिएर गृहजिल्ला पुगे समाजसेवी शर्मा
यी २ अमेरिकी मोडलले बेसबल मैदानमा यसरी पुरा स्तन देखाएपछि…
रबि किरणको प्रश्न : मदन भण्डारीले न्याय नपाएको देशमा निर्मलाले न्याय पाउलिन त ?
त्रिशूली नदीमा डुबेर एक पुरुष बेपत्ता
पराल काट्ने मेसिन वितरण